Adobe na-abanye n'ime Nkwado Ahịa site na iji Ngwa Ngwa Ha dị njikere | Martech Zone
Njikwa Ahụmịhe Adobe (AEM) na Digital Publishing Suite (DPS) jikọtara iji nye ndị otu ọmalụ ahịa ohere iji mepụta, bipụta ma bulie ngwa ngwa ọdịnaya-centric. N'ihi na eji ngwaọrụ Adobe, ejiri vidiyo, ọdịyo, ihe nkiri na ihe ndị ọzọ nwere ike iji ya yana arụnyere nchịkọta - na-enweghị mkpa maka mmepe ọ bụla ma ọ bụ nkwagharị nke ndị ọzọ.
Adobe amalitela Adobe Ngwaọrụ Ngwaọrụ, na-ekwe ka ndị otu ahịa Adobe hazie ihe ngosi ndị ahịa site na iji ngwa agwakọtara na iPads ha - ebe ha nwere ike iwepụta ngosipụta ngwaahịa, ịnweta nkwekọrịta ahịa, yana ịchekwa akụ dijitalụ dị ka PDF, ngosi na mgbasa ozi ndị ọzọ.
Adobe na-eme ka nkwado ahịa na mmetụta site na ya Ngwa ngwa ngwa ngwa emeputa site na iji DPS na Adobe Experience Manager. Ngwa mmeghe ahịa na-akwadebe ndị nnọchi anya iji ozi mmekọrịta na mbadamba mbadamba, ma na-ebute ọhụhụ n'ime arụmọrụ site na mwepu CRM na Salesforce.com.
Ihe Njikere Kwadoro tinyere CRM mwekota ka enwere ike nyochaa ihe a ma tinye ya na ntinye ego. Adobe na-ekwuputa usoro ire ere dị mkpụmkpụ, ịdị mfe nke ịhazi ya, na-enye otu ihe maka ndị ọrụ ha mmelite na-akpaghị aka na ọkwa ịkwanye. ị nwere ike ibudata ihe ọmụmụ ahụ Adobe, Na-ebelata Oge Ahịa.
Isi uru gụnyere:
Ahịa ahịa nwere ike nweta, tinye, ma budata multimedia ọdịnaya site na mbadamba ha.
ọ bụ ngwa na mfe-ebipụta ọhụrụ, customizable akụ na netwọk niile nke reps.
Ihe dị mkpa dị mkpa dị na otu ntụpọ, na-adị ugbu a na mgbe niile dị na offline.
ọ bụ ike na CRM yabụ ndị ahịa nwere ike ịhụ ihe na-adabara ndị ahịa ma mezie ọdịnaya maka arụmọrụ ka mma.
Nke a bụ ezigbo onye na-agbanwe egwuregwu n'echiche m. Ugboro ikike nke ire ere erepịala na nyiwe nke ndị ọzọ nke chọrọ mbugharị ọdịnaya na mmepụta nke ala. Adobe na-agabiga ngwa ọrụ ndị ọzọ a ma na-eme ka nchekwa, mmelite na nnyefe nke ahịa ahịa site n'aka onye mmebe, site na usoro nkwenye AEM, na n'aka ndị otu ahịa.
Tags: adobedps adobeNjikwa Ahụmahụ Adobeadobe njikere ngwa ọrụCRMụlọ obibi dijitalụdpsngwa ọrụNkwado ire ahịa